Midowga Musharixiinta oo shaaciyay in Farmaajo hor-istaagay doorsho heshiis lagu yahay - Radio Risaala: Somali News Online
Xildhibano sheegay in weerar lagu yahay Saadaq Joon kuna baaqay in...
Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa aad baraha bulshada loogu faafinayay in Taliyihii horer ee Booliska Gobolka Banaadir ee dhawaan xilka laga qaaday Saadaq...
Home Wararka Midowga Musharixiinta oo shaaciyay in Farmaajo hor-istaagay doorsho heshiis lagu yahay
Midowga Musharixiinta oo shaaciyay in Farmaajo hor-istaagay doorsho heshiis lagu yahay
Xubnaha Midowga Musharixiinta madaxweynaha ayaa ku eedeeyay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu ishor-istaag ku sameeyay in ay dalka ka dhacdo doorasho loo dhan yahay.
Qoraal kasoo baxay Midowga Musharixiinta oo ka kooban laba Bog ayaa waxaa lagu sheegay in Madaxweynaha xilligiisu dhammaaday uu carqaladayn joogta ah ku hayo geeddi socodka lagu baadigoobayo doorasho wadar oggol ah oo si nabad ah ku dhacda, iyadoo ujeedkiisu yahay muddo kororsi khilaafsan dastuurka, halisna ku ah xasilloonida dalka.
Sidoo kale Midowga Musharixiinta waxaa ay qoraalkooda kusoo bandhigeen 7 qodob oo ay sheegeen in Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qaaday si uu u carqaladeeyo doorasho ka dhacda dalka, waxaana ay kala yihiin qodobada.
In uu 6-dii Bishii febaraayo kasoo kacay gogoshii shirka Dhuusomareeb 4 oo ay ku kulansanaayeen madaxda dawlad goboleedyada iyo kuwa federaalka ah, isla maalintii uu shirka ka soo baxay ayuu isku dayay in uu Baarlamaanka ka raadiyo muddo kordhin, balse ay ka hor istaageen xildhibaanno diiddan sharci ku tumashada.
2) In iyadoo Muqdisho loogu ballansan yahay shir arrimaha doorashooyinka lagu dhammaystirayo uu habeennimadii 19-ka Febraayo amar ku bixiyey in la weeraro labadii Madaxweyne ee xilka kaga horreysay, iyo guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka, wuxuuna isla subixii 19-ka Febraayo amray in la rasaaseeyo dibadbax nabadeed oo ay hoggaaminayeen qaar ka mid ah xubnahaa Midowga Murashaxiinta, xildhibaanno iyo wasiirro hore.
3) In uu amray in mas’uuliyadda amniga garoonka diyaaradaha laga wareejiyo Booliska kastamka oo weligiis gacanta ku hayn jiray, laguna wareejiyo ciidanka Haramcad oo ku caan baxay weerarrada lagu qaado siyaasiyiinta iyo mucaaradka, si uu khalkhal u geliyo amniga wufuudda madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, loogana hor istaago kulammada ay la yeelanayaan siyaasiyiinta, xildhibaannada iyo qaybaha kale ee bulshada.
4) In uu carqaladeeyey in ay natiijo ka soo baxdo shirar hor dhac ah oo ay dawlad goboleedyada shanta ah uga heshin lahaayeen ajandaha shirka iyo dadaallo ay wadeen xubnaha beesha caalamka oo lagu kulansiin lahaa raysalwaasaraaha xukuumadda xil gaarsiinta iyo madaxda dawlad goboleedyada.
5) In uu 27kii Maarso, iyadoo ay shir u fadhiyaan shanta dawlad goboleed uu guddoomiyaha Golaha Shacabka kula heshiiyey meelmarinta muddo kororsi labo sano ah, laakiin ay hor istaageen xildhibaanno ka soo horjeeda sharci darrida muddo kordhinta.
6) In 15 kii xildhibaan oo isku daygii muddo kororsiga hor istaagay u diiday ka qaybgalka kulamada Golaha Shacabka, isagoo amray in sawirradooda la dhigo baraha koontarool, kuna amray ciidamada ammanka dhib u gaystaan haddii ay ku adkaystaan in ay Golaha Shacabka tagaan.
7) In ujeedkiisu uu ahaa in shirka u dhexeeya madaxda dawlad goboleedyada iyo kuwa federaalka uusan miro dhalin. Waxaana caddayn u ah in wasiirkiisa warfaafinta uu farriin maalmo ka hor la duubay ku eedeeyey fashilka shirka madaxda dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland.
Goluhu wuxuu ku ammaanayaa madaxda dawlad goboleedka Jubbaland iyo Puntland oo muddo bil ah ku sugnaa magaalada Muqdisho, dhabar adayga iyo sabarka ay muujiyeen, welina ay diyaar u yihiin in shirku sii socda, si loo helo doorasho wadar-oggol ah oo si nabad ah ku dhacda, halka madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday uu ku dhawaaqay in shirkii burburay.
Ugu dambeyn midowga Musharixiinta ayaa waxaa ay ugu baaqeen madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday in uu shirka dib ugu laabto, si loo xaqiijiyo qabsoomidda doorasho wadar ogol ah oo si nabad ah ku dhacda,isla markaana ay ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba u caddaynayaan inmadaxweynaha xilkiisu dhammaaday uu qaadayo mas’uuliyadda fashilka ku yimaada shirka, tahayna in lagula xisaabtamo.
Previous articleMadaxweyne Deni oo sheegay in Muuqaalka Shirka ee dowladdu baahisay horay loo duubay
Next articleMareykanka oo dib u billaabay kaalmadii uu siin jiray Falastiiniyiinta